कोरोना नियन्त्रणको नाममा मुलुक ठप्प भएको ६ महिना पुगिसक्यो । यो बीच सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेकै छन् । देशै भरिका अधिकांश निजी तथा सरकारी विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द छन् । अझै लामो समय खुल्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । धेरै विद्यार्थी सहरबाट गाउँ फर्किसकेका छन् । सरकार वा विद्यार्थी दुवैले चाहेर पनि यो शैक्षिक सत्रलाई जोगाउन सकिँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षकहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । तलबको भरमा परिवार पाल्नेहरूको जीवन निकै कठिन भइरहेको छ । सरकारले महामारीको बेला निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गर्‍यो ।
अतः सरकार ती निजी विद्यालयमा श्रम बेचेर जीवन चलाउनेहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? किन उनीहरूलाई यतिबिघ्न बेवास्ता ? किन उनीहरूको समस्याले तिमीलाई छुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राजस्वबाट तलब बुझिरहेका छन् । महामारीमा पनि उनीहरूको सुविधामा तिमीले कुनै कटौती गरेका छैनौ । कम्तीमा यसको आधा मात्रै भए पनि निजी विद्यालयको व्यवस्थापनमा छुट्याऊ । यसो भयो भने मात्रै निजी शिक्षकहरूले हामी पनि यो देशका नागरिक हौं भन्ने महसुस गर्न सक्छन् । र , उनीहरूको परिवारले महामारीमा दुई छाक राम्रोसँग खान पाउँछन् । केही न केही निर्णय त गर । यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइनु कदापि ठीक होइन । – सुग्रीम वि.क
ShareTweetSharePin0 SharesGoogle एउटा यस्तो शब्द हो जसको बारेमा विश्व को हरेक मान्छेलाई थाहा छ| यसको सुरुवात १९९८ मा भएको हो| आज यो हाम्रो दिनप्रतिदिन मा प्रयोग एउटा महत्वपुर्ण साधन भइसकेको छ| हामी प्रतेयक दिन एसको प्रयोग गर्छौ तर यसको बारेमा धेरै कुरा जान्दैनौ |आउनुस आज मैले तपाइलाई गूगल को बारेमा […]